Viracocha နှင့်အင်ကာ၏ဒဏ္ဍာရီ Origins
သမိုင်း & ယဉ်ကျေးမှု လက်တင်အမေရိကန်သမိုင်း
Viracocha နှင့်အင်ကာ၏ဒဏ္ဍာရီ Origins:
တောင်အမေရိက၏အင်ဒီးဒေသ၏အင်ကာကလူ Viracocha ပါဝင်သည့်ပြီးပြည့်စုံသောဖန်ဆင်းခြင်းဒဏ္ဍာရီ, ၎င်းတို့၏ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခငျသညျရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒဏ္ဍာရီအဆိုအရ Viracocha ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာသို့ပယ်ရွက်လွှမတိုင်မီလူအပါအဝင်ရေကန် Titicaca ကနေပေါ်ထွက်လာနှင့်ကမ္ဘာအတွက်အမှုအရာရှိသမျှတို့ကိုဖန်ဆင်းခဲ့တယ်။
အနောက်ပိုင်းတောင်အမေရိက၏အင်ကာယဉ်ကျေးမှု Conquest ၏ခေတ် (1500-1550) ကာလအတွင်းစပိန်အားဖြင့်ကြုံတွေ့အရှိဆုံးယဉ်ကျေးမှုအကြွယ်ဝသောနှင့်ရှုပ်ထွေးသောလူ့အဖွဲ့အစည်းထဲကတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါအင်ကာချီလီမှကျြမှောကျခတျေကိုလံဘီယာကနေဆန့်တစ်ဦးအားကြီးသောအင်ပါယာအုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ သူတို့ဟာ Cuzco မြို့၌ဧကရာဇ်ကအုပ်ချုပ်လူ့အဖွဲ့အစည်းရှုပ်ထွေးခဲ့သည်။ သူတို့ရဲ့ဘာသာတရားကို Viracocha, ဖန်ဆင်းရှင်အပါအဝင်တပါးသောဘုရားတို့၏သေးငယ်တဲ့ Pantheon အပေါ်ဗဟိုပြု Inti, နေမင်း နှင့် Chuqui Illa , ထိုမိုးကြိုး။ ညဉ့်သည်ကောင်းကင်၌နက္ခတ်ခဲ့ကြသည် အထူးကောငျးကငျတိရိစ္ဆာန်များအဖြစ်လေးစားကြည်ညို ။ သောနေရာများနှင့်အမှုအရာတစ်နည်းနည်းနဲ့ထူးခြားသောဖြစ်ကြောင်း, တစ်ဂူများကဲ့သို့တစ်ဦးရေတံခွန်တစ်မြစ်သို့မဟုတ်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ပုံသဏ္ဍာန်ခဲ့တောင်မှကျောက်: သူတို့ကအစ huacas ကိုးကွယ်ကြ၏။
ဒါဟာအင်ကာအရေးအသားရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါသော်လည်းသူတို့တစ်တွေခေတ်မီစံချိန်-စောင့်ရှောက်မှုစနစ်ရှိခဲ့ကြောင်းသတိပြုပါရန်အရေးကြီးပါသည်။ သူတို့ကအဘယ်သူ၏တာဝန်ကမျိုးဆက်ကနေမျိုးဆက်မှဆင်းလွန်ပါးစပ်သမိုင်း, သတိရဖို့ပဲတစ်ဦးချင်းစီ၏တစ်ဖွဲ့လုံးလူတန်းစားရှိခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ကအစဂဏန်းနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်အထူးသဖြင့်အခါ, အံ့သြလောက်အောင်တိကျမှန်ကန်ခဲ့ကြရသော knotted ကွိုး quipus, အစုံရှိခဲ့ပါတယ်။
ဒါဟာအင်ကာဖန်ဆင်းခြင်းဒဏ္ဍာရီ perpetuated ခံခဲ့ရသည်ဤနည်းလမ်းဖြင့်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကိုအောင်မြင်ပြီးပြီးနောက်အတော်ကြာစပိန် Chronicles သူတို့ကြားဖန်ဆင်းခြင်းဒဏ္ဍာရီချရေးသားခဲ့သည်။ သူတို့တစ်တွေအဖိုးတန်အရင်းအမြစ်ကိုကိုယ်စားပြုသော်လည်း, စပိန်ဝေးဘက်မလိုက်ထံမှခဲ့ကြသည်: သူတို့အန္တရာယ်ယူဖောက်ပြန်ကြားနာခဲ့သည်ထင်နှင့်အညီသတင်းအချက်အလက်များအုပ်စိုး၏။
ထို့ကြောင့်အင်ကာဖန်ဆင်းခြင်းဒဏ္ဍာရီများအများအပြားကွဲပြားခြားနားသောဗားရှင်းတည်ရှိ: အဘယ်အရာကိုအောက်ပါအတိုင်းယင်း Chronicles သဘောတူထားတဲ့အပေါ်ကိုအဓိကအချက်များကို၏အမြိုးမြိုးကိုစုစည်းရေးသားထားသည်။
အစအဦး၌, အားလုံးခဲ့မှောင်မိုက်နှင့်အလျှင်းမတည်ရှိ။ Viracocha ဖန်ဆင်းရှင်ရေကန် Titicaca ရာရေထဲကထွက် လာ. , အိုင်မှပြန်လာသောရှေ့တော်၌ထိုမြေနှင့်မိုဃ်းကောင်းကင်ဖန်တီးခဲ့သည်။ သူတို့ကုမ္ပဏီကြီးခဲ့ကြသည်ဇာတ်လမ်းအချို့ဗားရှင်းအတွက် - သူလည်းလူများ၏တစ်ဦးအပြေးပြိုင်ပွဲကိုဖန်တီးခဲ့တယ်။ ဤလူနှင့်သူတို့၏ခေါင်းဆောင်များ Viracocha ကြောင့်မုန်း, ဒါကြောင့်သူသည်နောက်တဖန်အိုင်မှထွက်လာသောသူတို့ကိုဖျက်ဆီးဖို့ကမ္ဘာကြီးကိုရေလွှမ်း။ ထို့အပြင်သူသည်ကျောက်များထဲသို့ယောက်ျားအချို့ကိုလှည့်။ ထိုအခါ Viracocha နေ, လနှင့်ကြယ်များကိုဖန်တီးခဲ့တယ်။
ပြည်သူ့ဖန်ဆင်းတဖန်ထွက် လာ. နေကြသည်:
ထိုအခါ Viracocha ကမ္ဘာ၏မတူညီသောဒေသများနှင့်တိုင်းဒေသကြီးများ populate မှယောက်ျားဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ သူကလူကိုဖန်တီးပေမယ့်ကမ္ဘာမြေအတွင်းပိုင်းကသူတို့ကိုထားခဲ့တယ်။ အဆိုပါအင်ကာမတူညီ Viracocharuna အဖြစ်ပထမဦးဆုံးယောက်ျားတွေကိုရည်ညွှန်းပါတယ်။ Viracocha ထို့နောက်လည်း viracochas ဟုခေါ်တွင်ယောက်ျား၏အခြားအုပ်စုဖန်တီးခဲ့သည်။ သူသည်ဤ viracochas အားမိန့်နှင့်သူတို့ကမ္ဘာကြီးကို populate မယ်လို့လူမျိုး၏ကွဲပြားခြားနားသောဝိသေသလက္ခဏာများကိုမှတ်မိဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ထို့နောက်သူနှစ်ယောက် မှလွဲ. ထွက်သည့် viracochas အပေါငျးတို့သစေလွှတ်ခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကား viracochas ပွညျသားဂူ, စီး, မြစ်များနှင့်ရေတံခွန်များထံသို့ ဝင်. - Viracocha လူတွေကမ္ဘာမြေထဲကထွက်လာလိမ့်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားရာအရပ်ရပ်။
အဆိုပါ viracochas သူတို့ကိုကမ္ဘာထဲကလာများအတွက်အချိန်ရောက်လာသောသူတို့ကိုပြောပြဤအရပ်တွင်လူအမိန့်မြွက်တော်မူ၏။ လူများတို့သည် ထွက်. မြေနှင့်လူနေထူထပ်။
Viracocha ထို့နောက်ကျန်ရစ်ခဲ့ကွောငျးနှစ်ခုမိန့်မြွက်တော်မူ၏။ သူ Andesuyo လို့ခေါ်တဲ့ဒေသနှင့် Condesuyo မှအနောက်ဘက်တွင်အခြားမှအရှေ့ဘက်တဦးတည်းစေလွှတ်ခဲ့သည်။ သူတို့ရဲ့မစ်ရှင်, အခြား viracochas နဲ့တူ, လူများနိုးထသူတို့ပုံပြင်များပြောပြရန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ Viracocha ကိုယ်တော်တိုင် Cuzco ၏မြို့၏ညှနျကွားထွက်ထားကြ၏။ သူတလျှောက်ထွက်သွားသည်မိမိလမ်းကြောင်းကိုအတွက်ဖြစ်နှင့်သောသူတို့ကလူနိုးပေမယ့်သေးနိုးမခံခဲ့ရခဲ့သူ။ Cuzco မှလမ်းတစ်လျှောက်သူ Cacha ၏ပြည်နယ်မှ သွား. ကမ္ဘာမြေကနေပေါ်ထွက်လာပေမယ့် Viracocha အသိအမှတ်မပြုဘူးသူကာနလူများ, နိုး။ သူတို့ကသူ့ကိုတိုက်ခိုက်သူကအနီးအနားမှာတောင်ပေါ်မှာမီးမိုဃ်းကိုရွာစေဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
Viracocha Cuzco Founds နှင့်ပင်လယ်ပြင်ကျော်လမျးလြှောကျ:
Viracocha သူမြင့်သောတောင်ပေါ်ပေါ်မှာထိုင်, လူများအထူးရုပ်တုကိုပေး၏ဘယ်မှာ Urcos မှဆက်လက်ပြောကြားသည်။ ထိုအခါ Viracocha Cuzco ၏မြို့ကိုတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ (သူတို့ကသူတို့နားပျဉ်းအတွက်ကြီးမားသောရွှေ discs တွေကိုနေရာချ) Cuzco ၏အရှင်သခင်များနှင့်အာဏာရလူတန်းစားဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟုဤ "ကြီးမားသော-နားရွက်": အဲဒီမှာသူကကမ္ဘာမြေထဲကထွက်သည့်Orejónတောင်းဆိုခဲ့သည်။ Viracocha လည်း Cuzco ၎င်း၏အမည်ကိုအပ်ပေးတော်မူ၏။ ကြောင်းပြုလေ၏ပြီးတာနဲ့သူကခရီးသှားတျောမူသကဲ့သို့, လူဦးနိုးထ, ပင်လယ်မှသွားလာ၏။ သူသည်သမုဒ္ဒရာသို့ရောက်ရှိသည့်အခါအခြား viracochas ကိုသူ့အဘို့စောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ကြသည်။ လာနှင့်သူတို့ပြန်ရောက် viracochas ဖြစ်ကြောင်းဆိုကြသည်မညျ့သူမှားယွင်းသောယောက်ျားသတိနှင့်ကြဉ်ရှောင်: အတူတူသူတို့အကြံဉာဏ်ကိုများထဲမှနောက်ဆုံးစကားလုံးမိမိလူတို့ကိုပေးခြင်းပြီးနောက်သမုဒ္ဒရာကိုဖြတ်ပြီးထွက်သွားတယ်။
အဆိုပါ Myth ဟာ၏အပြောင်းအလဲတွေဟာ:
သောကြောင့်သိမ်းပိုက်ယဉ်ကျေးမှု၏နံပါတ်၏, ဇာတ်လမ်းနှင့်ပထမဦးဆုံးအချရေးသားခဲ့သည်သူစိတ်မချရစပိန်စောင့်ရှောက်ခြင်း၏နည်းလမ်းသည်ဒဏ္ဍာရီအတော်ကြာမူကွဲရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, Pedro Sarmiento က de Gamboa (1532-1592) ညီအစ်ကိုနှစ်ယောက်တောင်ပေါ်တက်ပြီးအားဖြင့် Viracocha ရဲ့အဖျက်ရေလွှမ်းမိုးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ရသော (တောင်ပိုင်းကွီ၏နေသော) က Canary လူတွေနေတဲ့ဒဏ္ဍာရီပြောပြသည်။ ရေကိုဆင်းသွားလေ၏ပြီးနောက်သူတို့တစ်တွေတဲဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ တစ်နေ့မှာတော့သူတို့အစားအစာကိုရှာဖွေသူတို့အဘို့အအဲဒီမှာသောက်အိမ်ပြန်ရောက်လာတယ်။ ဤသည်အကြိမ်ပေါင်းများစွာဖြစ်ပျက်ဒါကြောင့်တစ်နေ့မှာသူတို့ပုန်းရှောင်ရာနှစ်ခု Canary မိန်းမတို့သည်အစားအသောက်ယူဆောင်လာကိုမြင်တော်မူ၏။ ညီအစ်ကိုတွေကပုန်းအောင်းမှထွက်လာသောပေမယ့်အမျိုးသမီးတွေထွက်ပြေးသွားတယ်။ လူတို့သညျထို့နောက်အမြိုးသမီးမြားကိုပြန်လည်ပေးပို့ဖို့သူ့ကိုမေး Viracocha ဖို့ဆုတောင်းလေ၏။ Viracocha ၎င်းတို့၏ဆန္ဒအခွင့်ကို, မိန်းမများပြန် လာ. : ဒဏ္ဍာရီအပေါငျးတို့သ Canary သောဤလူလေးယောက်ကနေဆင်းသက်ကြသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။
ခမညျးတျောဘာ Cobo (1582-1657) သာ. ကြီးအသေးစိတျထဲမှာအတူတူဇာတ်လမ်းကိုပြောပြသည်။
အဆိုပါအင်ကာဖန်ဆင်းခြင်း Myth ဟာ၏အရေးပါမှု:
ဤသည်ဖန်ဆင်းခြင်းဒဏ္ဍာရီဟာအင်ကာကလူအလွန်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်။ Semi-ဘုရားသခငျ့စိတ်ဝိညာဉ်၏တစ်ဦးစီအားဖြင့်စည်ပင်အထူးသောနေရာများ - ထိုသို့သောရေတံခွန်များ, လိုဏ်ဂူများနှင့်စမ်းအဖြစ်လူများတို့သည်ကမ္ဘာမြေကနေပေါ်ထွက်လာရှိရာအရပ်တို့ကို, huacas အဖြစ်ကြည်ညိုလေးမြတ်ခဲ့ကြသည်။ Viracocha စွပ်စွဲတိုက်ခိုက်နေသောကာနကလူအပေါ်မှာကျမီးကိုခေါ်ဘယ်မှာ Cacha အတွက်အရပျမှာ, အင်ကာတစ်ဦးနတ်ကွန်းတည်ဆောက်ထားနှင့်တစ်ဦး huaca ကြောင့်ကြောက်ရွံ့ကြ၏။ Viracocha ထိုင်လူများရုပ်တုပေးထားခဲ့ဘယ်မှာ Urcos မှာ, သူတို့ကအဖြစ်ကောင်းစွာတဲ့နတ်ကွန်းတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ သူတို့ဟာရုပ်တုကိုကိုင်ထားမှရွှေလုပ်မယ့်ဧရာမခုံတန်းလျားဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ Francisco က Pizarro နောက်ပိုင်းမှာသူ့ရဲ့ဝေစု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ်ခုံတန်းလျားတောင်းဆိုမယ်လို့ Cuzco ကနေပြန်ပေးလော့ ။
ကသိမ်းပိုက်ယဉ်ကျေးမှုရောက်လာသောအခါအင်ကာဘာသာတရား၏သဘောသဘာဝအားလုံးပါဝင်နိုင်ခဲ့တဲ့: သူတို့သိမ်းပိုက်ပြီးပြိုင်ဘက်အနွယ်သူသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့သည့်အခါမိမိတို့ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာအတွက်အနွယ်ရဲ့ယုံကြည်ချက်တွေကိုထည့်သွင်း (ပေမယ့်သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တပါးသောဘုရားတို့နှင့်ယုံကြည်ချက်မှအငယျဆုံးသောအနေအထားအတွက်) ။ ဒါကအားလုံးပါဝင်နိုင်အတွေးအခေါ်ဇာတိဘာသာရေးအားလုံးဆိုငျရာအစအနရှိရှိထုတ်ချေမှုန်းပစ်ဖို့ကြိုးစားနေနေစဉ်သိမ်းပိုက်အင်ကာအပေါ်ခရစ်ယာန်ဘာသာချမှတ်ခဲ့တဲ့စပိန်မှကာလတုန်းကမရခဲ့ဘူးဆနျ့ကငျြဘ၌တည်ရှိ၏။ အဆိုပါအင်ကာလူတို့သည်မိမိတို့သည်ကျွန် (အနေနဲ့အတိုင်းအတာအထိ) မိမိတို့၏ဘာသာရေးယဉ်ကျေးမှုကိုစောင့်ရှောက်ရန်ခွင့်ပြုခဲ့သောကြောင့်မညျးတျောကိုဘာ Cobo ထောက်ပြအဖြစ်အများအပြားဖန်တီးပုံပြင်များ, အသိမျးပိုကျ၏ထိုအချိန်ကရှိခဲ့:
"သူတို့ကအကြီးရေလွှမ်းကနေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ရှိရာဤလူဖြစ်နှင့်ကြပေမည်သူကိုမှနှငျ့ ပတျသကျ. သူတို့တစ်တွေတထောင်စိတ်ပျက်ဖွယ်ပုံပြင်များပြောပြပါ။ တစ်ခုချင်းစီကိုနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံသူ့ဟာသူများအတွက်ပထမဦးဆုံးကလူဖြစ်ဘဲလျက်၏ဂုဏ်အသရေမလုပ်ပဲနဲ့အခြားလူတိုင်းအတွက်သူတို့ထံမှလာ၏။ " (Cobo, 11)
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, ထိုကွဲပြားခြားနားသောဇာစ်မြစ်ဒဏ္ဍာရီဘုံထဲမှာအနည်းငယ်သောဒြပ်စင်ရှိသည်နှင့် Viracocha တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာဖန်တီးသူအဖြစ်အင်ကာလယ်ယာမြေများအတွက်လေးစားကြည်ညိုခဲ့သည်။ ယနေ့ခေတ်တောင်အမေရိက၏အစဉ်အလာဝါကလူ - ထိုအင်ကာ၏သားစဉ်မြေးဆက် - ဤဒဏ္ဍာရီနှင့်အခြားသူများကိုသိပေမယ့်အများဆုံးခရစ်ယာန်ဘာသာသို့ကူးပြောင်းနှင့်မဟုတ်တော့တဲ့ဘာသာရေးအသိတွင်ဤဒဏ္ဍာရီကိုယုံပါပြီ။
de Betanzos, Juan ။ လူတို့သည်အင်ကာ၏ Narrative (Roland Hamilton နှင့်ဒါန Buchanan အားဖြင့်ဘာသာပြန်ထားသောနှင့် edited) ။ Austin: တက္ကဆက်စာနယ်ဇင်း, 2006 (1996) တက္ကသိုလ်။
Cobo, ဘာ။ အင်ကာဘာသာတရားနှင့်အကောက်ခွန် (Roland Hamilton ကအားဖြင့်ဘာသာပြန်ထားသော) ။ Austin: တက္ကဆက်စာနယ်ဇင်း, 1990 တက္ကသိုလ်။
Sarmiento က de Gamboa, Pedro ။ (ဆာ Clement Markham အားဖြင့်ဘာသာပြန်ထားသော) ။ လူတို့သည်အင်ကာ၏သမိုင်း။ 1907. Mineola: ဒိုဗာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်း, 1999 ။
လက်တင်အမေရိက၏သမိုင်းအတွက်7နာမည်ကြီးအမျိုးသမီးများ
အဆိုပါ Popol Vuh - မာယာသမ်မာကမျြး
မက္ကဆီကန်တော်လှန်ရေး: Pancho ဗီလာ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ
Juan Domingo Peron နှင့်အာဂျင်တီးနားရဲ့နာဇီ
အယ်လ်ဒိုရာဒိုနှင့် ပတ်သက်. ဆယ်ပါးအချက်အလက်
ပှနျးက de Leon နှင့်လူငယ်၏ရေပန်း
ရှိမုနျကို Bolivar အင်ဒီးဖြတ်သန်းသွားသည်
Explorer ကို Panfilo က de Narvaez ဖလော်ရီဒါအတွက်ဘေးအန္တရာယ်တွေ့
Juan ပှနျးက de လီယွန်၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ
ထိပ်တန်း 10 ကျောင်းဆင်းပွဲသီချင်းများ - 2008
အဆိုပါ Tattoo စက်များ၏သမိုင်း
အတန်းအစားခင်မှာ Read6အကြောင်းရင်းများ
Homeschool Burnout ရှောင်ကြဉ်ဖို့ကိုဘယ်လို
အဆိုပါ Element တွေကို - မီးဘေး, ကမ္ဘာမြေ Air နှင့်ရေ
ရှာဖွေတွေ့ရှိသည့်အခါနှင့်ဘယ်လိုဂျပန်ကြိယာပုံစံ "သဲ" အသုံးပြုနည်း
Le FrançaisQuébécois - မေတ္တာနှင့်ခံစားချက်များကိုပြင်သစ်ကနေဒါဝေါဟာရ
တစ်ဦး preposition Phrase ၏အစိတ်အပိုင်းများဘာတွေလဲ?
Gallic စစ်ပွဲများ: Alesia ၏တိုက်ပွဲ
ဂျပန်ရဲ့ Ukiyo ကဘာလဲခဲ့သလား
မန်ဂါအဆိုတော် Tite Kubo အတူအင်တာဗျူး
လှိုင်းတံပိုးတို့သည် Paint ဖို့ဘယ်လို: Demo ပန်းချီ
အဲလစ် Munro ရဲ့နောက်ကွယ်က '' မှာတစ်ဦးပိုမိုနီးကပ်စွာမျှော်
'' Si '' Clauses အသုံးပြုခြင်း
သော pH တိုင်းတာခြင်း